M/weyne Shariif & wafti uu hogaaminayo oo u kicitimay Ugandha, kulamana la yeelanaya M/weyne Musaveni. – Radio Daljir
M/weyne Shariif & wafti uu hogaaminayo oo u kicitimay Ugandha, kulamana la yeelanaya M/weyne Musaveni.
Seteembar 17, 2010 12:00 b 0
Muqdisho, Sept 17 – Waxaa ka dhoofay madaarka Adam Cade wafti uu hogaaminayo M/weyne Shariif oo la sheegay in uu ku wajahan yahay Kampala, Ugandha. Safarfka M/weyne Shariif ayaa la sheegay in uu la xiriiro wada-xaajoodyo ka socda Ugandha oo lagu gorfaynayo arrimaha Somaliya.
Taliyaha ciidanka bilayska ee saldhiga Mijir oo ka xog warramay ilma yar oo la sheegay in ay bahallo cuneen, medykiisa laga helay duleedka Bossaso.